मुलुक भूतले सञ्चालन गरिरहेको छ ! | NepalDut
मुलुक भूतले सञ्चालन गरिरहेको छ !
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय काठमाडौं
नेपालमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र पूर्वाधार सेवा संचालनका लागि कोही पनि एकल जिम्मेवार निकाय छैनन् । जो छन् जस्ता देखिन्छन् , ती अधिकॉश सरकारले दिएको निर्माण बजेट हत्याउन र हत्याएर बजेट खर्च गर्न बिल बनाउन ठेक्का लगाउन र त्यसबाट अतिरिक्त आम्दानी असुल्न तर समयमा पूरा गर्नमा वेवास्था गर्दै र त्यसवाट हात चाट्नमा मात्र सरोकार राख्छन् ।
सरकार भनेको अमूर्त संस्था हो , यसलाई मूर्त बनाउन कसैलाई मतलब छैन र यसबाट अधिकारीहरूलाई कुनै लाभ पनि हुदैन । । ढल, नदी, वर्षातको बाढी, फोहरमैला, सडक, सडकसुरक्षा, ट्राफिक, धुवॉ, प्रदूषण, दिसा, खानेपानी, सरसफाई जस्ता पूर्वाधार सेवा संचालन रामभरोसे र पशुपतिनाथले गरिरहेका हुनन् । जे काम धेरैको जिम्मेवारीमा पर्छ त्यो कसैको जिम्माको हुदैन । यस्तोमा जनतालाई मुलुक अदृष्य भुतले संचालन गरेको लागिरहेको हुन्छ किनभने कस्कोमा गएर दुखेसो/गुनासो गर्ने ? कसले सुन्ने ? कसले गरिदिने? कुनै अत्तोपत्तो सरकारका कुनै अंगलाई हुने कुरै भएन ।
यो काम यसले गर्ने, यसको मात्र अन्तिम जिम्मेवारी हो भन्न नसक्दासम्म मुलुक भूतले संचालन गरिरहने छ , भूतलाई च्याप्प समाउन संभव हुने कुरै भएन । भूत/बोक्सी लागेपछि रोगीलाई डाक्टरले उपचार गर्न सक्दैन र ती धामी-झॉक्रीको शरणमा पुग्छन् । नेपालका सहरहरूका भौतिक पूर्वाधार संरचना र सेवा क्षमता एवं प्रणाली पूर्णत: ध्वस्त छ र जनता जति घोक्रो फुट्ने गरी चिच्याए पनि सरकाररूपी डाक्टर निरिह र केही गर्न असमर्थ छ, किनभने यहॉका पूर्वाधार संरचना/पूर्वाधार प्रणाली भूत/बोक्सीबाट ग्रसित/घेरिए जस्तै छ । यसलाई तंग्र्याउन अब ठूलो सुदीर्घ गंभीर मल्टिविशेषज्ञ संलग्न निरन्तरको साईको-फिजियोलजिकल ट्रिटमेन्टको खॉचो छ ।
भौतिक पूर्वाधार संरचनाको योजना निर्माण गर्न र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिक विकास र उपलव्धता गर्न दशौं वर्ष लाग्ने हुन्छ । त्यसमाथि कानुनची फट्याईगिरी गर्नमा पोख्त वर्तमान नेपाली समाजमा झन बढी समय लाग्ने पनि गरेको सर्वविदितै छ । कसैले बोल्दैमा, घोषणा गर्दैमा वा बजेट व्यवस्था गर्दैमा फटाफट भैहाल्थ्यो भने नेपाल अहिले बिगतका घोषणाहरूबाट नै विकसित मुलुक भैसकेको हुन्थ्यो । निरन्तर दृढतापूर्वक, दायाँबायाँ नगरी, दशकौं स्थीर नीति, नेतृत्व र लगनशील हुदै लागेमा मात्र यस्ता पूर्वाधार र जनशक्ति विकास योजना पूरा गर्न सकिन्छ ।